इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन,समायोजनपछि कतिमा खुल्यो कारोबार ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन,समायोजनपछि कतिमा खुल्यो कारोबार ?
काठमाडौं - नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १५% बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भएको छ । बोनस समायोजनपछि इन्भेष्टमेन्टको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६६४ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसआधारमा बुधबार बैंकको सेयर कारोबार प्रतिकित्ता ६६४ रुपैयाँमा खुलेको हो । यसको औसतआधधार मूल्य भने ७५८ रुपैयाँ छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कात्तिक ७ गते साधारण सभा गर्न बुधबार बुक क्लोज गरेको हो । साधारण सभामा बैंकले १५% बोनस सेयर र २५% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव लैजाने भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ११ करोड ४१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । इन्भेष्टमेन्टको सेयर पुँजी १० अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३४ रुपैयाँ २० पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २२७ रुपैयाँ ४९ पैसा छ ।